NextMapping | Ọkà Okwu Isi Ihe Omume
Daalụ maka ịhọrọ ka gị na onye isi okwu Cheryl Cran rụ ọrụ maka ihe omume ị na-abịa. N'ebe a, ị ga - ahụ ihe niile ịchọrọ ijikere maka inwe Cheryl dịka onye isi okwu dị mkpa maka ndị otu gị. Anyị na-atụ anya inyere gị aka ịmepụta ahụmịhe nzukọ pụrụ iche!
Lee vidiyo niile
Budata ntuziaka nzukọ anyị
Aghọtara dị ka # 1 Ọdịnihu nke ọrụ influencer site Onalytica, na onye edemede nke akwụkwọ 9 gụnyere mbipụta nke abụọ nke "NextMapping ™ - Ntughari, Nanya na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ" yana akwụkwọ ọrụ ibe.
A zụlite NextMapping as dịka akara azụmaahịa azum ahịa nke nwere ọrụ niile nke Cheryl na nyocha gbasara ọdịnihu ọrụ yana onye ndu chọrọ ịnyagharị mgbanwe n'ebe ọrụ. Oge erugo ịghara ịnụ banyere ọdịnihu mana iji NextMapping ™ ruo ebe ahụ! Ekwesịrị iji teknụzụ dị na ọrụ iji kwadebe maka ọdịnihu yana itinye uche na otu teknụzụ nwere ike isi meziwanye ihe ndị mmadụ na-eweta.
Foto maka ibipụta na web
Maka ozi ndị ọzọ gbasara etu Cheryl ga-esi hazie okwu mkpirisi okwu maka ihe omume gị na-esote, sonyere anyị taa.